Posted by ကို Tranquillus | စက်တင်ဘာ 4, 2018 | အွန်လိုင်းသင်တန်း
suite, G, ကဘာလဲ?
ဤသူကား tools တွေတစ် suite ကိုဒါပေမယ့်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအသုံးပြုသောဖြစ်ကြောင်း Google ကဆော့ဖ်ဝဲ။ ဒီရလဒ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသမျှကို tools များ၏အားသာချက်ယူစာရင်းသွင်းခြင်းလိုအပ်သည်။
မျိုးစုံမီဒီယာမှတဆင့်ဖြတ်သန်းနေချိန်မှာထိထိရောက်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ဒါဟာ suite ကိုရဲ့စွမ်းရည်။ အမှန်စင်စစ်, ဆော့ဖ်ဝဲကွန်ပျူတာ, တက်ဘလက်သို့မဟုတ်ပင်ဖုန်းမှဝင်ရောက်နှင့်အသုံးပြုသည်။
အဘယ်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့က G Suite ထဲတွင်ရှာတွေ့?
အဆိုပါ tools တွေမြောက်မြားစွာရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့အဘို့အဘယ်သို့ရှိသနည်း သူတို့ကသငျသညျအလုပ်မလုပ်ဖို့နဲ့အောင်မြင်စွာစီမံကိန်းများပြီးစီးရန်လိုအပ်အင်္ဂါရပ်အားလုံးဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။
သငျသညျအစပိုင်းတွင်သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်အတူချိတ်ဆက်ခံရဖို့ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာကိုဝင်ရောက်နှင့်သင်သွားလေရာရာ၌တန်ဖိုးရှိရှိနေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဂျီမေးလ်, Google+ မှာ, Hangouts ကိုတွေ့ဆုံ, အစီအစဉ် ... လိုအပ်ချက်ရှိပါ!
ထို့နောက်ဒီ suite ကိုတည်ဆောက်တိုးနှင့်သင့်စီမံကိန်းကိုထွက်သယ်ဆောင်ရန်အများအပြားဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ စာတမ်းများ, Sheet များ, ပုံစံများ, Keep, Jamboard ... tools များ၏ရှေးခယျြမှုကျယ်ပြန့်သည်နှင့်ထိုလူအပေါင်းတို့သည်အသီးအသီးအခြားအ complementing မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သုံးပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, G Suite ထိရောက်စွာအမျိုးမျိုးသောစီမံကိန်းများ၏တိုးတက်မှုစောငျ့ရှောကျဖို့ဒေတာသိုလှောင်ရေးကိရိယာများထောက်ပံ့ပေးသည်။ Google Drive ကိုနှင့် Google Cloud ကိုနှင့်အတူသငျသညျဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်၏ login မှတဆင့်ကနေသင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများနှင့်သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းထားနိုင်ပါတယ်။
ဤသည် suite ကိုလည်းလုံခြုံရေးနှင့်သငျသညျကိုထိရောက်စွာသင့်ရဲ့ဒေတာနှင့်အလုပ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ခွင့်ပြုမရရှိနိုင်ပါ setting များကိုပါဝင်သည်။ ဒါကြောင့်အခုသင်အသုံးပြုသင်ယူ, သင့်စီမံကိနျးအတှကျ Suite, G ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနှင့်မွေးစားနိုငျသညျ!
အဘယ်ကြောင့်, G Suite လေ့ကျင့်ရေးစင်တာမှတဆင့်သွားပါ?
, G Suite သင်၏ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အလားတူအစီအစဉ်များကိုပေါ် မူတည်. လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တစ်ဦးမဟုတ်တော့သို့မဟုတ်တိုတောင်းအချိန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်ရာပြည့်စုံသည်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီ tool ကိုအများဆုံးလုပ်လေ့ကျင့်ပေးရန်ထို့ကြောင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ပါနှင့်ဗီဒီယိုများကိုတချို့အဖြေတွေကိုနှင့်အကူအညီနဲ့ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်စောင့်နေကြလော့။ သို့သော်တစ်ဦးချင်းစီဆော့ဖ်ဝဲကိုကျွမ်းကျင်ဖို့သင်ယူခြင်းရဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက G Suite လေ့ကျင့်ရေးစင်တာနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီအလေ့ကျင့်ရေးသငျသညျအပြည့်အဝအကြံပေးချက်များနှင့်ထောက်ခံစာများနှင့်အတူအသီးအသီး tool ကိုသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကွာဟချက်သည်နှင့်အညီသင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့လမ်းပြရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သင်က Google tools များအပေါ်ထိရောက်စွာစတင်ရန်တစ်ဦးအမြန်လမ်းညွှန်ရှာနေလျှင်ဧကန်မလွဲ, Quick Start လေ့ကျင့်ရေးရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒီလမ်းညွှန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်, G Suite တွေနဲ့ရရှိနိုင်ပါဦးချင်းစီ tool ကိုနှင့် software ရဲ့ features တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်ရန်အတွက်အများအပြားအဆင့်သို့ကွဲပြား:
ဂျီ Suite tools များမှတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်ရန်
သင့်ရဲ့, G Suite န်ဆောင်မှုပိုကောင်းအောင်
ဒီလျင်မြန်လမ်းညွှန်အလုံအလောက်မပါလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, သင်သည်သူတို့၏လယ်ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးချင်းစီ tool ကိုများအတွက်ပြည့်စုံလေ့ကျင့်ရေးကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါလေ့ကျင့်ရေးစင်တာထိထိရောက်ရောက်ဒေတာ, သိုလှောင်တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်မျှဝေဖို့ Drive ကိုသင်ယူဖို့ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီလမ်းညွှန်သင်ဒီ tool များ၏အားသာချက်ယူကိုသိနှင့်မာစတာဖို့လိုအပ်သမျှကိုသင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျတငျသှငျးနှင့်ဒေတာများသိမ်းဆည်းထား, တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်, အမြင်နှင့်ပြင်ဆင်ရန်, ဝေစုများနှင့်လည်းခွဲခြားထိရောက်စွာသူတို့ကိုရှာဖွေဘယ်လိုသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
သင်ဤသင်တန်း၏အဆုံးမှာ Formats အမျိုးမျိုးနဲ့ဖိုင်တွေကိုနှင့်အတူတစ်နေရာတည်းတွင်သင့်ရဲ့ဒေတာကိုစောင့်ရှောက်ရန် tool ကိုကျွမ်းကျင်ဖို့နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကသင်တို့အဘို့စိုးရိမ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့် Access ကနေလက်လှမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။
Gmail လမ်းညွှန်အတွက်၊ ၎င်းတို့ကို မပို့မီ အီးမေးလ်များကို ဖန်တီးနည်း၊ သင့်စာတိုက်ပုံးကို မည်ကဲ့သို့ စုစည်းရမည်နည်း။ စာပို့ သင်၏အီးမေးလ်များကို ထိရောက်စွာရှာဖွေပါ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လက်မှတ်များဖန်တီးကာ သင်၏အချက်အလက်များ (ပြက္ခဒိန်၊ အလုပ်များ၊ မှတ်စုများ) ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
Cloud ကိုရှာဖွေခြင်းသင် (န်ဆောင်မှုများနှင့်အဆက်အသွယ်များ) ရှာဖွေပြီးစိတ်ကြိုက်, ဒါပေမယ့်လည်းသင့်အကောင့်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုစီမံခန့်ခွဲသို့မဟုတ်သင့်ဖိုင်များကိုအချို့အကူအညီရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
Hangouts ကို chat နဲ့ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်စုံလင်ဖို့လမ်းညွှန်များမှကျေးဇူးတင်စကားကျွမ်းကျင်, ဒါပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့ screen ကိုမျှဝေသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်ဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျတွေ့ဆုံ Hangouts ကို, Hangouts ကို Chat ကိုနှင့်ဂန္ဗားရှင်းအပေါ်သင်တန်းများယူနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုလျင်မြန်စွာမရှိမဖြစ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဒါဟာလျင်မြန်စွာအသုံးပြုနိုင်မှသင်ယူဖို့ထို့ကြောင့်လိုအပ်သောနှင့်လေ့ကျင့်ရေးစင်တာငျသညျဤအခွင့်အလမ်းပေးထားပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဖြစ်ရပ်များစီစဉ်ခြင်းနှင့်သတိပေးချက်များကိုထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တစ်ဘုံလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါနဲ့ဖန်တီးပါ။ သင့်ရဲ့စီမံကိန်းတွေပြီးမြောက်ရန်, သင်ကောင်းတစ်ဦးအဖွဲ့အစည်းကလိုပါလိမ့်မယ်, ဒီ tool ကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
အုပျစုမြားကိုလညျးဆှေးနှေးမှုအဖွဲ့များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းစိတ်ဝင်စားစရာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်, စာရင်းများဖန်တီးရှယ်ယာဖိုင်တွေ ... ဒါကြောင့်အဆိုပါလမ်းပြထို့နောက်အုပ်စုများအပေါ်ဖြန့်ချိ, လက်ျာအုပ်စုတစ်စုကိုရှာဖွေကြောင့် join ဖို့သင်ယူဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းသင်ထားတဲ့အတွက်အုပ်စုများကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းအနေဖြင့်သင့်ရဲ့အဖွဲ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အုပ်စုတစ်ခုကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့က Google + ကိုသင်ဿုံလုံခြုံသောကော်ပိုရိတ်လူမှုကွန်ယက်ကတဆင့်သင့်ရဲ့အဖွဲ့နှင့်အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ခွင့်ပြုသည်သောကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အိုင်ဒီယာဝေမျှဖို့အတှကျအွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းဖန်တီးဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါလမ်းညွှန်, သင်သည်သင်၏ပရိုဖိုင်းကို set up ကိုကူညီညာဖက်ကလူနှင့်လမ်းကြောင်းရှာတွေ့ပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းဖန်တီး, သင့် collection များကို, သင်၏ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာထုတ်ဝေပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ, G Suite လေ့ကျင့်ရေးစင်တာပိုမိုမြန်ဆန်သင့်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာကျွမ်းကျင်ရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
အဆိုပါ software ကိုအများဖြစ်ကြ၏ပေမယ့်, G Suite လေ့ကျင့်ရေးစင်တာထိုသူအပေါင်းတို့သည်တစ်ဦးပြည့်စုံလမ်းညွှန်ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအမရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံး software ကိုသုံးစွဲဖို့သင်ယူဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေကိုမှန်ကန်စေသည်။
Docs ဘို့သင့်ကိုဖန်တီး, ဒါပေမယ့်လည်းတင်ပြချက်များတင်သွင်းဖို့သင်ယူပါလိမ့်မည်ကိုလမ်းပြ။ သင်တို့သည်လည်း, စာရွက်စာတမ်းများကိုတည်းဖြတ်သင့်ရဲ့အဖွဲ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဝေမျှပြီးတော့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးပုံနှိပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ tool ကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်အလုပ်ကိုအဘို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုကျွမ်းကျင်ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားခံရဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
Sheet များအဘို့, spreadsheets အပေါ်အတူတကွအလုပ်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ။ ဒီလမ်းညွှန်ခွဲဝေမှု, download, နှင့်ပုံနှိပ်မတိုင်မီသူတို့ကိုအကြောင်းအရာ add, သင်သည်သင်၏တင်ပြချက်များဖန်တီးတင်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါသင့်ရဲ့တင်ပြချက်များအပေါ်တစ်ပြိုင်နက်တည်းလုပ်ကိုင်ဖို့ခွင့်ပြုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆလိုက်လည်း, တစ်ဦးအသုံးဝင်သော software ကိုရလိမ့်မည်။ အခြေခံ, သင် contents တွေကိုဖန်တီးတင်သွင်းဖို့ခွင့်ပြု add, ရှယ်ယာ, သင်၏တင်ဆက်မှု retrieve နှင့် print ထုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီ tool ကိုကျွမ်းကျင်ဖို့လေ့ကျင့်ရေးစင်တာရွေးချယ်ဖို့ထို့ကြောင့်အရေးကြီးပါသည်။
အကောင်အထည်ဖော်မှုစစ်တမ်းကောက်မေးခွန်းများတုံ့ပြန်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ဖြစ်ရပ်များ၏ဖန်တီးမှုမှတဆင့်စစ်တမ်းများဖန်တီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ပုံစံများ။ အဆိုပါလေ့ကျင့်ရေးစင်တာလျင်မြန်စွာတစ်မေးခွန်းလွှာဖန်တီးနှင့်၎င်း၏စီမံကိန်းတွင်အကျိုးအဖြေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ပြီးတော့ပေးပို့ခြင်းမပြုမီ configure လုပ်ဖို့သိလာကြတယ်။
က်ဘ်ဆိုက်များကိုလည်းပြည်တွင်းရေးစီမံကိန်းများအတွက်ပူပေါင်းပြီးအများပြည်သူက်ဘ်ဆိုက်များကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုချိန် မှစ. ၎င်းတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံကိန်းကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တစ်နေရာလေးကိုကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဝေမျှနှင့်သင့် site ပေါ်တွင်ထုတ်ဝေနိုင်တော့မည်မှစိတ်ကြိုက်ထိရောက်စွာ update လုပ်ဖို့, သင့်ရဲ့ site ကိုဖန်တီးရန်မည်သို့မည်ပုံလေ့လာပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးမျိုးသောပုံစံများအတွက်-do list များနှင့်သတိပေးချက်များဖန်တီးရန်အသုံးပြုတဲ့ software ဖြစ်ပါသည်ထားပါ။ ဒါဟာသူ့အဖွဲ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေစဉ်ထိရောက်စွာယင်း၏စီမံကိန်းတွင်ရှေ့ဆက်ဖို့အသုံးပြုမှုကိုသိရန်ထို့ကြောင့်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ, G Suite လေ့ကျင့်ရေးစင်တာလွယ်ကူသောပြန်လည်ရယူခြင်းအဘို့ထိုသူတို့စည်းရုံး, မှတ်စုဖန်တီးတည်းဖြတ်ရန်သင်ယူဖို့ကူညီပေးသည်။ သင့်သတိပေးချက်များသတ်မှတ်ရန်နှင့်သူတို့မရှိတော့အသုံးဝင်သောဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကိုသင်ဖျက်ပစ်သည်အထိသင့်အချက်အလက်များကို share ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ။
အဆိုပါ, G Suite လေ့ကျင့်ရေးစင်တာကိုထိရောက်စွာသင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံကိန်းများတည်ဆောက်ရန်အပြည့်အဝကသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့လျင်မြန်စွာသမျှသောဤ tools များကျွမ်းကျင်ဖို့သတိရပါရန်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ, G Suite သင်တန်းကျောင်း စက်တင်ဘာလ 4th, 2018Tranquillus
အောက်ပါလုပ်ငန်းခွင်မှာသင့်ရဲ့ Interpersonal ဆက်သွယ်ရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်